Imakethe yezikebhe zomkhosi we-Yiwu ibandakanya ikakhulukazi izesekeli zezinwele, imaski, izimbali zokwenziwa, amathoyizi, ikepisi lomkhosi, izingubo zomkhosi, izimvilophu ezibomvu, ubuciko bukakhisimusi nokunye okungaphezu kwesigaba esisodwa.
Imakethe yezikebhe ze-Yiwu festival ithunyelwa ikakhulukazi e-United States, Egypt, Mexico, Brazil, Japan, Australia, United Arab Emirates nakwamanye amazwe.
Njengoba umnotho wase-US usimama, ukwazi ukukhulula amandla okuthekelisa emakethe yase-USA, okwenza imikhiqizo ikhule i-yiwu festival. Ngaphezu kwalokho, ngenxa ye-yiwu ibhizinisi lohwebo lwangaphandle libheka ukubaluleka okukhulu emakethe yezimpahla zomkhosi, izimakethe ezisafufusa njengeBrazil, I-Egypt, i-Mexico festival supply demand ikhuphuke kakhulu.Abathengi abavela emhlabeni wonke jikelele izipho ezivela e-China.
Ukuze kuthuthukiswe ikhwalithi yokuthunyelwa kwemikhiqizo ehlinzeka ngefestivali ye-yiwu, amabhizinisi athumela kwamanye amazwe kufanele abeke ikhwalithi enhle yezinto ezingavuthiwe, aqhubeke amise uhlelo lokuphatha ikhwalithi yebhizinisi, futhi aqinise isevisi yezobuchwepheshe, athuthukise ukuncintisana kwemakethe ye-wholesale internationalyiwu.
Imikhiqizo: zonke izinhlobo zezinsiza zezinwele, amabhande ezinwele, iziqeshana zezinwele, amakamu ezinwele, amawigi...
Isikali: cishe amatafula angama-600
Indawo: Isigaba A no-B, F2, Yiwu idolobha lokuhwebelana lamazwe ngamazwe D5.
Amahora okuvula: 09:00 - 17:00, unyaka wonke ngaphandle kokuvalwa ngesikhathi
Imakethe yezesekeli zezinwele
Imakethe yemihlobiso yezinwele ingenye yezimakethe ezithuthuke kakhulu nezinempumelelo e-Yiwu.Lena imakethe enazo zonke izinsiza ezidingekayo njengesistimu ye-air-condition, imishini ethengisa iziphuzo nezindawo zokudlela.
Imakethe Yezimbali Zokwenziwa
Imakethe enkulu ingaphakathi kwe-Yiwu International Trade City, esitezi sokuqala se-District One, yabelana ngesitezi esifanayo nemakethe yamathoyizi.
Izitolo ezingaphezu kuka-1000 zithengisa izimbali zokwenziwa kanye nezinsiza zezimbali zokwenziwa lapho.Esitezi sesine se-District One, International Trade City, kunengxenye ephethwe yi-Taiwanese.Ungathola ezinye izinto zekhwalithi ngempela lapho.
Imakethe yezimbali zokwenziwa ingenye yezimakethe zasendaweni zokuqala, inomlando weminyaka engaphezu kwe-10.
I-Yiwu Toys Market iyimakethe yamathoyizi enkulu kunazo zonke eChina.Amathoyizi nawo angenye yezimboni eziqine kakhulu ze-Yiwu.Ungathola wonke amathoyizi amakhulu ase-China afana ne-ULTRAMAN yase-Guangdong ne-GoodBaby yase-Jiangsu.Yebo futhi uzobona amathani emikhiqizo emincane kanye nezindawo ezingezona imikhiqizo.
Kunezitolo ezingaba ngu-3,200 zamathoyizi kagesi, amathoyizi e-inflation, amathoyizi kanokusho, amathoyizi ezingane ezisacathula, amathoyizi ogogo... esitezi sokuqala esifundeni esisodwa se-Yiwu International Trade City.
I-YIWU AMAKEKETHI KAKHISIMUSI YIMAKEKETHI ENKULU YOKUTHUNYELWA IMIKHIQIZO KAKHISIMUSI E-CHINA.
Imakethe kaKhisimusi igcwele isihlahla sikaKhisimusi, ukukhanya okumibalabala, umhlobiso kanye nakho konke okuhlobene nemikhosi kaKhisimusi.Kuhlukile nakwezinye izindawo, ngoba le makethe uKhisimusi cishe uthatha unyaka wonke.Imihlobiso kaKhisimusi engaphezu kuka-60% yomhlaba kanye nama-90% aseShayina akhiqizwa yi-Yiwu.